ခေတ်မှီ လှပဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဆန်းများဖြင့် တံခါးလက်ကိုင်များကို တာရှည်ခံအသုံးပြုနိုင်ပြီး အရည်အသွေးမှာလည်း ကောင်းမွန်စိတ်ချရသောကြောင့် သုံးစွဲသူ Customers များကို စိတ်တိုင်းကျမှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်မှာ အသေချာပင် ဖြစ်ပါသည်
Samsung Digital Door Lock SHS-H630
Touch Screen with Luxurious Design Withametallic, high-quality black touch screen, the key pad cover can be utilized easily without having to open it. Random Security Code Feature With the random security code feature, homeowners can feel extra safe that passwords will never be exposed. After pressing enter, utilizingatwo digit random number input system before inputting one&#039;s pre-determined password increases security and safety. Safe with the Assurance Handle to Prevent Unauthorized Entries To open the door from within, users simply press the button and turn the handle therefore preventing any potential outside break-ins from intruders. Specifically, forced entry attempts and repeated password authentication failures trigger an alarm sound. Additionally, the alarm system has the option to be set up that any attempt to handle the lock system from the inside will trigger an alarm. For example, if an intruder breaks-in throughawindow and attempts to exit through the front door, the alarm will be triggered. Intuitive Moving LED, Sound Setup and Deactivation Features When the door lock is functioning properly,ared LED light at the center of the door lock blinks inacircular pattern to signal to the owner its fully operational status. In addition, password input and door opening sounds can be easily adjusted to suit one&#039;s environmental needs. Modern, Slim, Black &amp; Silver Design Withaslim metallic and black design, the casing gives the door lockamodern and sophisticated look. Ergonomically designed for the user&#039;s ease of use, the Samsung Smart Door Lock received the three top design accolades including the Red-dot Design Award. Battery Replacement Reminder Feature When battery replacement time approaches,amelody rings whenever the door opens, providing safety reminds and greater convenience.
Samsung Digital Door Lock SHS-H700 (= SHS-5230)
The Samsung Digital Door Lock includesavariety of products which are suited to consumers needs by providing home security, convenience and aesthetic satisfaction, and as such, the product is recognized by consumers both domestically and abroad. The Samsung Digital Door Lock has an Intrusion Alarm function and the advanced security feature sounds the alarm and unlocks the door at the same time when it detects fire inside the home. The Samsung Digital Door Lock has an Intrusion Alarm function and the advanced security feature sounds the alarm and unlocks the door at the same time. The products also have convenient features that lock themselves automatically when closed, unlock when contacted by the key, and can be opened even if the smart card is inawallet. In addition, the Samsung Digital Door Locks aesthetic appeal won the World iF Design Award and Reddot Design Award. The products are distinguished from other products in design by using the same materials used in the latest advanced IT equipment. The Samsung Door Lock (SHS-5230) adopts Dual Access Authentication which only opens the door when both fingerprint identification andapassword are used according to the user&#039;s settings, to enhance home security. The product also adopts state of the art Random Security Coding technology which generates two variable digits, and after pressing these two digits,auser can enter his/her own password and will not expose the password on the touch pad. The product enhances user convenience withafeature which opens and closes the cover of the fingerprint identification panel automatically whenauser presses the open button in the center of the door lock.
Tempered Glass ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ၂မျိူး၂စားရှိပါသည်။ Safety Glass က ပုံမှန်လုပ်ငန်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပြီး Standard Glass မှာ Curved Tempered ဖြစ်ပြီး အကွေး အဆန့်ရသော Glass အမျိူးအစား ဖြစ်သည်။ Standard Glass ထက် Tempered Glass သည် ၄ဆ ၅ဆလောက် ပိုမိုသိပ်သည်းကာ အလွယ်တကူ အက်ကွဲခြင်းနှင့် မှန်ကွဲခြင်းများကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိသည်။ အဆိုပါ Curved Tempered သည် ရာသီဥတုဒဏ် နှင့် အပူဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီး လေပြင်မုန်တိုင်းဒဏ်လည်း ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည် ရှိသည်။ အဆိုပါ Glass အမျိုးအစားကို ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်၊ Skylight များ၊ ပြတင်းပေါက် တံခါးများ ၊ Tub Enclosures နှင့် အဆင့်မြင့် ရေချိုးခန်းတံခါးများတွင် အသုံးပြုရန်သင့်တော်သော Glass အမျိူးအစားဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ အဝင်အထွက်နှင့် ပြတင်းတံခါးများကို Tempered Glass ဖြင့် အများဆုံးဆောက်လုပ်ကြသည်။ မကြာသေးမှီ နှစ်များတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဆိုပါ Glass ကို အသုံးပြု၍ ဆောက်လုပ်လာကြသည်။ သာမန်ဖန်ထည်များထက် အဆ၂၀ ပိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Insulating glass units, or IGUs
Insulating glass units or IGUs သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Glass တစ်မျိူးဖြစ်ပြီး အိမ်တွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုထားလျှင် ဆောင်းရာသီဆို အနွေးဓာတ်ပေးနိုင်ပြီး နွေရာသီဆို အပူများကို အထဲမဝင်အောင် ဟန့်တားထားနိုင်သည်။ အဆိုပါ Insulating မှာ လေ (သို့မဟုတ်) Noble Gas များဖြည့်တင်းအသုံးပြုထားသည်။Argon (သို့မဟုတ်) Krypton လို Gas မျိူးပါထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသော Glass ဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Glass တစ်ခုစီမှာ မျက်နှာပြင် ၂ဖက်ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် IGUs Glass တွင် စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင် ၄ခုရှိသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် မည့်သည့်အဆောက်အအုံ မဆို အလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်ပြီး ခိုင်ခံလှပမှုရှိသည်။
လှပဆန်းသစ်သော Wood Door များ
ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်လှပသော သစ်သားဖြင့် ဖန်တီးပုံဖော်ထားသည့် တံခါးအမျိူးအစား တစ်ခုဖြစ်သည်။တောင့်တင်း ခိုင်မာပြီး ရေရှည်အသုံးခံကာ ဆွေးမြေ့ ပျက်စီးခြင်း မဖြစ်အောင် ခေတ်မှီ နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။အိမ်ရှေ့၊ အိပ်ခန်း နှင့် မီးဖိုချောင် တံခါးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။အရောင်ကို အဖြူရောင်ဖြင့် အလှဆင်ထားသောကြောင့် အလင်းရောင် ပိုမိုရရှိစေကာ စိတ်ကြည်လင်အေးမြစေသည်။အလွယ်တကူ ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သော တံခါးလက်ကိုင်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုပေးထားသည်။ဆန်းသစ်လှပပြီး အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းစုံ တံခါးအမျိူးအစားများကို Showroom သို့ လာရောက်ကြည့်ရှူ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းဆန်းသော အိမ်တွင်းသုံး Wood Door များ
ရိုးရှင်းသပ်ရပ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် သစ်သားတံခါးအမျိူးအစားဖြင့် မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။နေရာ ဒေသ မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်သော တံခါးအမျိူးအစားဖြစ်သည်။နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။အနက်ရောင် နှင့် ရွှေရောင် ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ယဉ်ယဉ်လေးဖြင့် လှပစေသည်။ရာသီဥတုကြောင့် ကျူံ့ခြင်း၊ပွခြင်း မဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။Size စုံ Color စုံ အရည်အသွေးပြည့် သစ်သားတံခါးများကို Customer များ Order မှာယူသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ဒီဇိုင်းဆန်း၍ လှပသော Wood Door များ
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပသော တံခါးအမျိူးအစား တစ်ခုကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်အောင် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။အတွင်းရော အပြင်ပါ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အတွင်းရော အပြင်ပါ အလှဆင်ပုံဖော်ထားပြီး ယှက်ဖြာသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။ထို့အပြင် အရောင်ကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်စက်မှုရှိအောင် ပြုလုပ်ထားကာ ခဲပြာနှင့် မီးခိုးရောင်ကို လိုက်ဖက်ညီအောင် ပုံဖော်ထားသည်။ဆန်းသစ်လှပမှု အပြင် အရည်အသွေးပါ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့် တစ်ခါအသုံးပြုထားလျှင် တာရှည် အသုံးခံသောကြောင့် ခဏခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည့် စရိတ်သက်သာအောင် ကူညီထောက်ပံပေးသော တံခါးအမျိူးအစား ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းဆန်းသော တံခါးဖြင့် သင့်အိမ်ကို အလှဆင်လိုပါသလား။ ဆန်းသစ်လှပသော သစ်သားတံခါးကို ရွေးချယ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါသလား။သင့်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ရိုးရှင်းလှပသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော တံခါးဖြင့် မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။သဘာဝ သစ်အသားကို လှပဆန်းသစ်သော တံခါးအသွင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော သစ်သားတံခါးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ခိုင်ခံမှု ရှိခြင်း ၊ ပေ့ါပါး သွက်လပ်ခြင်း နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း အစရှိသော အကျိူးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။တံခါးလက်ကိုင်ကို လည်း အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပြီး အနက်ရောင် နှင့် သဘာဝ သစ်သားအရောင်ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားမှုကြောင့် သင့်အိမ်ကို သဘာဝအတိုင်း တင့်တယ်လှပစေသည်။
လှပသေသပ်သောအိမ်သာသုံးတံခါးရွက်များ(Tiolet Cubicles &amp; Locker)
a 12 Myanmar ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ ၏ အဆောက်အဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း များတွင်အသုံးပြုသော အိမ်သာသုံး တံခါးရွက်များ (Tiolet Cubicles &amp; Locker)များကို လူ ကြီးမင်းတို့ အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းတံခါးရွက်များသည် အရည်သွေးေ ကာင်းမွန်သော ဘုတ်ပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အသုံးပြု တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပါသ သည်။ဒါ့ပြင်၎င်းဘုတ်ပြားများသည် သေသပ်လှပပီး ကြာရှည်ခံသောကြောင့် သုံးစွဲရာတွင်လ ည်းစိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းအိမ်သာသုံး တံခါးရွက်များ (Tiolet Cubicles &amp; locker) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက a12 Myanmar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
ဆန်းသစ်လှပသော Wood Door ဒီဇိုင်းများ
သူမတူသော ဒီဇိုင်းဆန်းဖြင့် သင့်အိပ်ခန်းကို အလှချင်ပါသလား။ယခုပြသထားသော ဒီဇိုင်းဖြင့် သင့်အိပ်ခန်းတံခါးကို တပ်ဆင်လိုက်ပါ။ခန့်ညားထည်ဝါမှုကြောင့် သင့်စိတ်ကို ကြည်လင်အေးမြစေသည်။ပြင်ပမှ အသံများ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် အနှောက်အယှက် ကင်းကင်း အိပ်စက် အနားယူနိုင်သည်။အရည်အသွေးကို အဓိကထား အသုံးပြုခြင်းကြောင့် တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထပ်မံပြုပြင်စရိတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်မှုကြောင့် သူမတူသော ခံစားမှုမျိူးကို ပေးစွမ်းနိုင်သော တံခါးအမျိူးအစားဖြစ်သည်။များသောအားဖြင့် လူကြီးများသဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားသည်။
သေသပ်လှပပြီး ခိုင်ခံ့သော သံပန်း သံတံခါး ( Iron Grille Door )
Steel Emperor ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက် အဦး ခြံဝင်း နှင့် ခြံစည်းရိုး တံခါး များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သံပန်း သံတံခါး Sun Shade နှင့် လက်ရန်း၊ ၀ရန်တာ အမျိုးမျိုး ကို Steel Structure ဖြင့် အထပ်မြင့်/နိမ့် အဆောက်အဦးအမျိုးမျိုးတို့ကို (PAE) စနစ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းမှန်၊ ပစ္စည်းမှန် အရည်အသွေးပြည့်မှီစွာဖြင့် စိတ်တိုင်းကျတာဝန်ယူ လက်ခံဆောက်လုပ်ပေးနေပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း သံပန်း တံခါး ( iron grille door ) ကို အသုံးပြု ဆောက်လုပ်လိုပါက Steel Emperor ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အဖြူရောင် Wood Door
ယခု မိတ်ဆက်ပေးမည့် သစ်သားတံခါးမှာ ရိုးရှင်လှပပြီး ခိုင်ခံအကြမ်းခံသော တံခါးတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။အိမ်ကို အလင်းရောင်ကောင်းကောင်း နှင့် စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးနိုင်သည်။ အိမ်ရှေ့တွင် ဖြစ်စေ၊ အိပ်ခန်း တံခါးပေါက်တွင် ဖြစ်စေ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် နေရာတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလှဆင်နိုင်သည်။တံခါးတစ်ချပ်လုံး နှင့် ဘောင်ပါမကျန် အဖြူရောင်ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ အလယ်ကို မှန်အမှုန်ဖြင့် အသုံးပြုကာ ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသောကြောင့် ဆန်းသစ်လှပသော တံခါးတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ကျူံ့ခြင်း၊ပွခြင်း များ မဖြစ်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ဒီဇိုင်းလှပပြီး ခိုင်ခံမှုရှိစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။အဖြူရောင် အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုဖြင့် စိတ်ကြည်လင်အေးမြမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော တံခါးတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။